ဖြစ်ရပ်မှန် ကျိန်စာသင့်အိမ်တွေရဲ့ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Ghost House
ထိုင်းနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ထွက်လာတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်းရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကားပါ။ Horror ချစ်သူတွေ မဖြစ်မနေကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ Los Angeles ကနေ အလည်အပတ်ထွက်လာတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးဟာ Suvarnabhumi airport ကို လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်လာပြီး Gogo tourist guide နဲ့အတူ တည်းခိုကြမယ့် ဟိုတယ်သို့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ ချစ်သူနှစ်ဉီးရဲ့ romantic dinner မှာဘဲ Jim ရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းမှုကြောင့် ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ Julie ရဲ့အပျော်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ dinner လေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီး ဟိုတယ်သို့ပြန်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား Rob နဲ့ Bill ဆိုတဲ့ ၂ယောက်နဲ့ ခင်မင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ထပ်ခွင့်ရရှိတာကို ဂုဏ်ယူကြောင်း သူတို့ ၂ယောက်ကို ဒကာခံဖို့ပြောပြီး Night Out သွားကြရင်း ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ နတ်စင်တွေအကြောင်းကို စကားစပ်မိခဲ့ကြပါတယ်။ နတ်စင်တွေဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အလွန်ကောင်းကြောင်း အတူသွားကြမယ်ဆိုပြီး invite လုပ်လိုက်ပါတယ်။
နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ သူတို့တစ်တွေ နတ်စင်တွေများစွာရှိတဲ့ တောထဲကသုသာန်သို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပြီး ဇာတ်လမ်းကတော့ ထိုအချိန်မှာဘဲ ဇာတ်ရှိန်ပိုတက်လာပါပြီ။ နတ်စင်တွေနားကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ Julie တစ်ယောက်ကတော့ ကင်မရာတစ်လုံးကိုင်ပြီး ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ spirit house ရဲ့ အတွင်းထဲက ကျောက်တုံးလေးကို ဖယ်ရှားမိလိုက်ချိန် အထဲမှ လူတစ်ယောက်က သူမကို ညို့နေသလို ရုတ်တရက်အာရုံထဲမှာ ခံစားရပြီး အတွေးတွေလွင့်မျောသွားပါတော့တယ်။ ထိုအချိန်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး အုံ့ဆိုင်းပြီး မကောင်းဆိုးဝါးမိန်းမတစ်ယောက်ပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ Rob နဲ့ Bill ကတော့ ကားကိုမောင်းပြီး ထွက်ပြေးသွားကြပါပြီ။ Julie တစ်ယောက်တော့ စိတ်ခြောက်ခြားသလို ပုံစံမျိုးနဲ့ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ပြီး Jim ဟာ Julie ကို တောထဲကနေကယ်တင်လွတ်မြောက်လာသောလည်း ထိုအချိန်ကစပြီး သူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ မြင်တွေ့ရသမျှအရာတွေဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ Ghost House ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာအရှိန်အဟုန်နဲ့ အသက်ဝင်လာခဲ့ပါပြီ။ Julie တစ်ယောက်ဘယ်လို ဒုက္ခတွေထက်ခံစားရအုံးမယ် Jim ဟာသူရဲ့ဇနီးလောင်းကို မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ ဒုက္ခနွံထဲကနေ ဘယ်လိုတွေ အဖြေရှာပြီး ကယ်တင်အုံးမလဲဆိုတာကိုတော့ အားလုံးနဲ့အတူ ထိပ်လန့်ချင်တာကြောင့် အောက်ကရုပ်ရှင် trailer ကိုကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြရအောင်……
spirit house (သို့) Ghost House (သို့) နတ်စင် ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိအောင်အလွယ်ရှင်းပြရရင်တော့ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ တချို့နေအိမ်ခြံဝင်းတွေထဲမှာ အမွှေးတိုင်၊ အလင်းတိုင်တွေနဲ့ ပူဇော်လေ့ရှိတဲ့ အိမ်သေးသေးလေးတွေလို ဟာမျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ မကောင်းဆိုးဝါးလို့ မသတ်မှတ်သလို အစောင့်အရှောက်လို့တောင် သတ်မှတ်ကြပါသေးတယ်။ ထိုင်းမှာတော့ အစောင့်အရှာက်လို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီးချိန်မှာတော့ ထိုင်းကို သွားရမှာစိတ်ထဲမှာ ကြောက်သလိုလိုတော့ ဖြစ်မိလိုက်ပါသေးတယ်။ နောက်တခုကတော့ ထိုင်းရောက်တဲ့အခါ ဟိုတယ်တွေရှေ့နဲ့ ခြံတွေထဲမှာ ဒီလို အိမ်လေးတွေရှိတာကို သတိထားမိလိုက်တာပါဘဲ။ သူတို့ပြောပုံအရတော့ ခိုးကိုရာမဲ့နေတဲ့ ဝိဉာဉ်တွေရဲ့အိမ်ပါတဲ့နော်….။ အိမ်ကိုဒုက္ခပေးမှာဆိုးလို့ထင်ပါရဲ့ အစားအသောက်တွေ မီးတွေ အမွှေးနံ့သာတွေတောင် ပူဇော်ထားပါသေးတယ်။ အကယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အစစအရာရာဆင်ခြင်နေထိုင်ကြပါလို့ သတိလေးပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားဟာ ထိတ်လန့်စရာကောင်းယုံတင်မက အပြင်မှာ လက်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေကိုပါ အသိပညာပေးထားတာကြောင့် မသိသေးတာတွေကိုပါ ဆင်ခြင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။
Image Source : https://www.facebook.com/pg/ghosthousemovie
ပထမရက်သတ္တပတ်မှာ ဝင်ငွေ $536 million ရရှိခဲ့တဲ့ Star Wars: The Last Jedi
Disney ကတော့ ၂၀၁၈ ကို ပိုက်ဆံတွေထိုင်ရေပြီး ကြိုဆိုတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရုံတင်နေတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Star Wars: The Last Jedi ဟာ စတင်ရုံတင်ပြီး ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာပဲ $536 million ရရှိသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပမာဏဟာ သူ့အရှေ့ကဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Star Wars: The Force Awakens ကိုမှီဖို့နည်းနည်းလိုနေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော Star Wars: The Last Jedi ဟာ မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း Box Office မှာအောင်မြင်နေပါတယ်။ ရုံတင်တဲ့ကာလပြီးဆုံးသွားချိန်မှာ The Force Awakens ရရှိခဲ့တဲ့ $2.068 billion ကိုကျော်သွားနိုင်မလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Star Wars: The Last Jedi ဟာ 2015 ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ Disney ရဲ့ Star Wars Sequel Trilogy ထဲက ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Star Wars ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာတော့ ၈ ခုမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Rian Johnson ရဲ့လက်ရာဖြစ်တဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာ ပြောချင်စရာလေးတွေဟိုနားဒီနားရှိပေမယ့် critic တွေရော သာမန်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်အများစုကပါနှစ်သက်ကြပြီး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲချီးကျူးခြင်းကို ခံနေရပါတယ်။ Star Wars: The Last Jedi က လက်ရှိအချိန်မှာရုံတင်နေဆဲဖြစ်တာမို့ ပိတ်ကားကျယ်ပေါ်မှာခံစားဖို့အချိန်မှီပါသေးတယ်။
Paramount က G.I. Joe3ထွက်ရှိမယ့်ရက်ကိုကြေညာလိုက်ပြီ
ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ ခေတ်လွန်လက်နက်တွေနဲ့ အလန်းစားအက်ရှင်အခန်းတွေကြောင့်လူသိများတဲ့ G.I. Joe ဇာတ်လမ်းရဲ့ တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိမယ့်ရက်ကို Paramount ကကြေညာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထွက်မယ်လို့လျာထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ မသိရှိရသေးပါဘူး။
ပထမဆုံး G.I. Joe ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ The Rise of Cobra ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းက ရုံတင်ခဲ့ပြီး Channing Tatum နဲ့ Marlon Wayans တို့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကာ Box Office မှာ $302.5 million ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကားဖြစ်တဲ့ Retaliation ကတော့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့ပြီး Channing Tatum နဲ့ Dwayne Johson တို့ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ကာ Box Office မှာ $375.7 million ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ဒုတိယကားရဲ့ Trailer လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး။ တတိယကားမှာ အဲဒီထက်ပိုမိုက်တဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေပါဝင်လာဖို့ မျှော်လင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Action & Adventure, Hollywood
All female cast နဲ့ Ocean’s 8 ရဲ့ပထမဆုံး Trailer
Ocean’s 11, 12 နဲ့ 13 ပြီးတော့ ဆက်ထွက်လာတာက Ocean’s 8 ဖြစ်ပါတယ်။ Ocean’s Trilogy ရဲ့ sequel/spin-off ဖြစ်တဲ့ Ocean’s 8 ဟာ နာမည်ကြီးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်တွေချည်းပဲအသုံးပြုထားပြီး ဒီသူခိုးအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မှာက Danny Ocean (George Clooney) ရဲ့ညီမဖြစ်သူ Debbie Ocean (Sandra Bullock) ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ Ocean အဖွဲ့သားတွေကို Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Sarah Paulson နဲ့ Helena Bonham Carter တို့ကသရုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Trailer အရဆိုရင် Ocean’s 8 ဟာ Ocean’s 11 နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူပါတယ်။ Debbie Ocean ထောင်ကနေလွတ်လာတာဟာ Ocean’s 11 တုန်းက Danny Ocean ထောင်ကလွတ်လာတာနဲ့ဆင်တူပြီး ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ role တွေရော ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကပါဆင်တူကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဇာတ်လမ်းပိုင်းအရဆိုရင် အရှေ့ Ocean ဇာတ်ကားတွေကိုကြိုက်ရင် Ocean’s 8 ကိုမုန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ Ocean’s 8 ကို ၂၀၁၈ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Action & Adventure, Comedy, Hollywood
Winter 2017-2018 ရာသီအတွက် စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ Anime ၁၀ ခု
Anime ချစ်သူတွေလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ၃ လတစ်ကြိမ် နောက် season မှာ ဘယ် anime seires တွေကိုကြည့်မယ်လို့ရွေးချယ်ရတာဟာ အလုပ်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီအတွက်ပြင်ဆင်သင့်သလောက်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီဆောင်းပါးမှာ Winter 2018 အတွက် ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Anime series ၁၀ ခုနဲ့ ဘာကြောင့်အဲဒီလိုရွေးချယ်ရတာလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးသွားမှာပါ။
ဒီ list ဟာ ကျွန်တော့်စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် objective ဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုက anime ချစ်သူတွေအကြိုက်နဲ့ကိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီ list ကို အောက်ပါ criteria တွေအရပြင်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်-
Source Material: Anime အများစုက Manga, Light Novel, Game အစရှိတာတွေကို မှီငြမ်းထားကြတဲ့အတွက် anime တစ်ခုကောင်းနိုင်မကောင်းနိုင်ဆိုတာကို သူ့ရဲ့ source material ရဲ့ အရည်အသွေးကိုသွားကြည့်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။
Studio: Anime တွေကိုအသက်သွင်းရေးဆွဲတဲ့ studio တွေဟာကလည်း source material တွေနဲ့တန်းတူအရေးကြီးပါတယ်။ Studio တွေရဲ့ animation quality နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်ရှုရအဆင်ပြေအောင်တည်းဖြတ်နိုင်စွမ်းက anime series တစ်ခုအောင်မြင်မအောင်မြင်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Genre: ဒါကတော့ personal taste နဲ့ဆိုင်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ list ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ anime အမျိုးအစားတွေက အနည်းနဲ့အများ priority မြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
List ကိုမဖော်ပြခင် special mention အနေနဲ့ Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen နဲ့ Dakashi Kashi season2တို့ကိုဖော်ပြလိုပါတယ်။ အဲဒီ series တွေဟာလည်း အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြပေမယ့် list ကို sequel တွေနဲ့ချည်းမပြည့်သွားစေချင်လို့ ဒီနေရာကနေ သီးသန့်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
10. Zoku Touken Ranbu: Hanamaru
ကျွန်တော် Touken Ranbu ဂိမ်းကိုလည်းမဆော့ဖူးပါဘူး။ ဒါကြီးစဖြစ်သွားတာက Touken Ranbu ကို ဂါထာမန်းသလို တဖွဖွရွတ်နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပါ။ ဒီအကြောင်းအခုမှကြားဖူးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Touken Ranbu ဆိုတာက ဒီနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတဲ့စတိုင်ဖြစ်တဲ့ အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို လူအသွင်ပြောင်းထားတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ series မှာသမိုင်းထဲကနာမည်ကြီးဓားတွေကို ကောင်လေးချောချောလေးတွေအသွင်နဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အခုလာမှာကတော့ season2ဖြစ်တဲ့အတွက် season 1 ကြည့်ဖူးသူတွေအတွက်ကတော့ ထွေထွေထူးထူးညွှန်းနေစရာမလိုပါဘူး။ အပျော်အနေနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
9. A Place Further Than The Universe (Sora Yori mo Tooi Basho)
Ah… How I love Original shows! Original series တွေကိုစောင့်ကြည့်ရတာကတော့ ကျွန်တော့ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုလိုပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ကြိုတင်မသိရှိနိုင်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ပတ်ဘာများဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီး အပတ်စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရတာက ဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့ အရသာတစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီ anime ကိုရေးဆွဲတဲ့ studio က Madhouse ဆိုတော့ အများကြီးစဉ်းစားနေစရာမလိုပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ To Watch List ထဲရောက်သွားပါတယ်။ ဒီ anime ဟာ အန္တာတိကတိုက်ကိုခရီးဆန့်မယ့် ကောင်မလေး ၄ ယောက်အကြောင်းကိုသရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Yowamushi Pedal ရဲ့ စတုတ္တမြောက် season ဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဘီးပြိုင်တာတွေနဲ့ အဓိကဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ Yowamushi Pedal ဟာ Sports anime တွေနှစ်သက်သူတွေကြည့်သင့်တဲ့ series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
7. Love is Like after the Rain (Koi wa Ameagari no You ni)
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ ဒီ anime ကိုစိတ်ဝင်စားသွားရတာက သူ့ရဲ့ trailer မှာပါဝင်တဲ့ Aimer သီချင်းကြောင့်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာမှ ဒီ anime က ဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဆိုတာကို လိုက်လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက Tachibana Akira လို့အမည်ရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ သူမဟာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အချိန်ပိုင်းဝင်လုပ်နေတုန်းမှာ အချစ်ဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ သူမ ရင်ထဲအသည်းထဲကနေ နှစ်သက်ရသူကတော့ အဲဒီဆိုင်ရဲ့မန်နေဂျာ အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် တစ်ခုလပ်မုဆိုးဖိုပါ။ သူတို့ ၂ ယောက်ကြားက ကြီးမားလှတဲ့အသက်အရွယ်ကွာခြားမှုကြီးကို ဘယ်လိုများကျော်ဖြတ်ကြမလဲဆိုတာကို ဒီ anime လေးကသရုပ်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့… Warning, Feels Ahead! ပါပဲ၊ Seinen အမျိုးအစားဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းက တော်တော်လေးလက်တွေ့ဆန်ပြီး လေးနက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။
Genre: Action, Fantasy, Game, Magic
Ainz Ooal Gown!!!… ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး.. မင်းသားရဲ့နာမည်ကိုခေါ်လို့ကောင်းလို့ခေါ်ကြည့်တာပါ။ Overlord ဟာ Trapped-in-a-Video-Game အမျိုးအစားဇာတ်လမ်းတွေထဲက တော်တော်ကောင်းတယ်ပြောလို့ရတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ season ကိုကြည့်ဖူးရင်တော့ ဒီ season2ကိုမကြည့်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ သူ့ရဲ့အလန်းစား character design တွေက anime ချစ်သူတွေကို အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
5. The Ryuo’s Work is Never Done! (Ryuuou no Oshigoto!)
ကျွန်တော် lolicon တစ်ယောက်မဟုတ်ပါ… အစကတည်းကမပြောထားရင် အထင်လွဲခံရမှာစိုးလို့ကြိုပြောထားတာပါ။ ဒီ anime ကို Shogi Master တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားနဲ့ သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ချင်တဲ့ ၉ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတို့ကြားကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဇာတ်လမ်းဆင်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Synopsis ရယ် Trailer ရယ်ကနေခန့်မှန်းလို့ရတာကတော့ ဒီ anime ဟာ Moe factor တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အပန်းပြေရယ်ချင်မောချင်ရင်တော့ ဒီ series ကို သင့်ရဲ့စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲ ထည့်ထားသင့်ပါတယ်။
4. The Disastrous Life of Saiki K. (Saiki Kusuo no Psi Nan)
ဒီနောက်ပိုင်းမှာ episode တစ်ခု ၅ မိနစ် anime series တွေကို လူတွေတော်တော်သတိထားမိလာကြပါတယ်။ ဒီ series ဟာဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုမျိုးထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ anime မှာ Supernatural စွမ်းအင်မျိုးစုံကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ Saiki Kusuo ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေကို ဟာသဆန်ဆန်သရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီ anime ကိုကြည့်ရင် သေချာပေါက်ရယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
3. The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments (Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu)
အပျံစားအက်ရှင်ခန်းတွေကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ ဝေးဝေးလံလံရှာမနေပဲ Seven Deadly Sins ကိုသာပြေးကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောရမှာပါ။ ဒီဟာကိုမကြည့်ခင် season 1 ကို အရင်ပြေးကြည့်လိုက်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းပိုင်း၊ animation ပိုင်းတွေ ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ series တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က season 1 အပြီး နောက်ပိုင်းဇာတ်လမ်းတွေကို Manga ဖတ်ထားတာမို့ တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်ချင်ပါတယ်… It’s gonna be lit!
လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို စကားလုံးအြဖစ်အသွင်ပြောင်းပေးတဲ့ Violet Evergarden လို့အမည်ရတဲ့ Auto Memories Doll နဲ့ သူမရဲ့ဘဝခရီးလမ်းကိုသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးဟာ ဒီ season အတွက် လူတွေအမျှော်လင့်ထားဆုံး anime တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီ anime ကိုရေးဆွဲတဲ့ studio က animation frame တိုင်းကို အလှဆုံးဖြစ်အောင် ရှယ်ရေးဆွဲတတ်တဲ့ Kyoto Animation ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ပိုင်းကလန်ပျံထွက်နေမယ်ဆိုတာ 120% အာမခံပါတယ်။ Drama ကြိုက်တတ်သူတွေအတွက် Must Follow ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်တောင်မိုက်နေရင် ဘာလို့နံပါတ် ၁ မဖြစ်တာလဲလို့မေးချင်စရာရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ နံပါတ် ၁ နေရာက anime က ကျွန်တော့်ရဲ့ personal favorite ဖြစ်နေလို့ပါ။
Japanizing Beam ထိထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်စဖွယ် Umu လေးကို anime series ထဲမှာမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲသိချင်ရင် Google မှာ Nero Claudius ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက်ပါ၊ ထိပ်ဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ Anime ကောင်မလေးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Fate/Extra: Last Encore ဟာ Grail War တွေ၊ Servant တွေနဲ့ဇာတ်အိမ်တည်တဲ့ Fate Franchise ရဲ့ နောက်ဆုံး entry တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ anime မှာ ရောမအင်ပါယာရဲ့ဘုရင်ကြီး Nero Claudius က Saber class, Knights of the Round Table ထဲက Gawain က Saber class, နာမည်ကျော်ပင်လယ်ဓားပြကြီး Francis Drake က Rider class, နာမည်ကျော်သူရဲကောင်း Robin Hood က Archer class, ကလေးကဗျာနဲ့သီချင်းဖြစ်တဲ့ Nursery Rhyme က Caster class, တရုတ်သိုင်းဆရာကြီး Li Shuwen က Berserker class အဖြစ်နဲ့ပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ Fate series ပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီ anime ကို follow မလုပ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။
Cover Image Source: CLare@Pixiv